I-spaghetti enenyama kwi-béchamel sauce | Ukupheka kweKhitshi
I-spaghetti enenyama kwi-béchamel sauce
UCarmen Guillen | | IPasta, Ukupheka kwenyama, I-Salsas
Ukuba kukho ukutya phantse wonke umntu akuthandayo, kunjalo ipasta. Nokuba zii-macaroni, izaphetha, i-spaghetti, njl., Bayabathanda abantu abadala kunye nabantwana.
Ngeli xesha sithathe imbiza yespaghetti kwi-pantry yethu kwaye sayisebenzisa ukwenza iresiphi emnandi I-spaghetti enenyama kwi-béchamel sauce. Sihlala silitya olu hlobo lwesitya kunye nesosi yetumato kodwa namhlanje bendifuna yahluke.
Nalu uluhlu lwezithako kunye nenqanaba ngenyathelo lokulungiswa kwalo. Babenjalo kakhulu! Silungiselele iresiphi yabantu aba-2 okanye aba-3 kodwa ukuba baninzi kuni, nantsi nibala isixa sepasta ngomntu ngamnye.
Ezi spaghetti zinenyama kwi-bechamel sauce kukutya okuqhelekileyo onokukubeka ukuba ufuna ukubetha incasa yomntu wonke.
Uhlobo lweRipeipe: IPasta
I-250 gram yenyama yenkukhu-inyama egayiweyo
45 iigrem zebhotolo
Isipuni 1 senqanaba lomgubo
Ityuwa entle ukunambitha
Masiqale ngenyamaKwipani yokutshiza, nge-oli yeoli yomnquma, yiphule i igalikhi kunye netswele kumaphepha. Xa kugqityiwe, siya kubeka inyama, esiya kutyhoboza ngoncedo lwepuni okanye ifolokhwe. Sizokuxovula amaxesha ngamaxesha ukuze inyama ingancamatheki. Xa sele kugqityiwe ukwenziwa, yongeza ityuwa, ipepile emnyama yomhlaba kunye nekhari ukunambitha, kwaye uxhokonxe ukubopha zonke iincasa. Sibeka bucala xa inyama igqityiwe kwaye ikhululekile, ingabambeki.
Kwimbiza ephakathi siya kubeka pheka ispaghetti. Ukwenza oku, vele ugcwalise imbiza ngamanzi, uthele amathontsi ambalwa eoyile ye-olive ukuze i-spaghetti ingagcini kunye netyuwa encinci. Xa amanzi eqala ukubila, siya kongeza i-spaghetti kwaye siyivumele ipheke phakathi 10-15 minutos kubushushu obukhulu.
Ngelixa i-spaghetti yethu yenziwe, siya kuyenza eyethu Isosi yeBechamel. Ukwenza oku, epanini yokupanda, eya kuba ngaphezulu kobushushu obuphantsi, yongeza ibhotolo kwaye xa sele inyibilikile, yongeza umgubo kancinci kancinci kwaye uxhokonxe ngoncedo lwefoloko yethu yeplanga. Okulandelayo kwaye ngaphandle kokuma ukuze uvuse, songeza kancinci kancinci 300 ml ubisi. Ukuba siyenza yonke into encinci, siya kuyiphepha ukuze sibenamaqhuma. Xa sinesosi entle songeza umnxeba wokugqibela ukuze izuze incasa: ityuwa kunye ne-nutmeg ukunambitha.
Ngoku konke okufuneka ukwenze kukujoyina izinto ezintathu kwaye ukonwabele oku kutya kumnandi ngokulula.
Njengomphetho wokugqibela, ukuba uyayithanda oregano, ungongeza kancinci umhombiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » IPasta » I-spaghetti enenyama kwi-béchamel sauce
UNorma Gonzàlez. sitsho
Phendula uNorma Gonzàlez.
Inyama kunye nerayisi
I-Apple compote kunye nesinamon